နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုစိန့်လူးဝစ္ - CSB နှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်• DutchtownSTL.org
နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုမှ Dutchtown လမ်းညွှန်
အဆိုပါ နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရို St.Louis ၏စင်တာသည်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောပြissuesနာအမျိုးမျိုးနှင့်ဖြေရှင်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရေးပေါ်မဟုတ်သည့်အခြေအနေကိုဖြေရှင်းနေလျှင်၊ CSB အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဖုန်းခေါ်သောသူသည်။
မြို့ပြဌာနများနှင့်အေဂျင်စီများကဤပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသော်လည်း CSB သည် ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများကို ဗဟိုပြု၍ အစီရင်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစေသည်။ လမ်းများ ဦး စီးဌာန၊ တိရိစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ရေး၊ ပန်းခြံများနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရမည့်အစား CSB သည်သင်၏မြို့ပြissuesနာအများစုကိုကိုင်တွယ်ရန်တစ်နေရာတည်းသောဆိုင်ဖြစ်သည်။
တယ်လီဖုန်းဖြင့် CSB ကိုဆက်သွယ်ပါ
နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် (314) 622-4800။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ဦး တည်သွားစေရန်အချက်ပေးမှုများကိုသင်လိုက်နာပါလိမ့်မည်။ သင်၏ပြissueနာကိုအစီရင်ခံပြီးပါက ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုနံပါတ်တောင်းခံနိုင်သည်။ ကိစ္စတစ်ခုကိုဆက်လုပ်ရန်သင်ဖုန်းခေါ်သောအခါဤနံပါတ်ကိုကိုးကားပါ။
CSB ဖုန်းလိုင်းကိုတနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့၊ နံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုမှာ - ပြissuesနာများကိုအစီရင်ခံဘို့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ သင်၏ပြreportနာကိုအစီရင်ခံရန်အဆင့်အနည်းငယ်ကိုသင်လိုက်နာပါလိမ့်မည်။
အမျိုးအစားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ပြaနာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်ဒုတိယစာမျက်နှာသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်၏ပြissueနာနှင့်ကိုက်ညီမည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုသင်မတွေ့ရပါ။ အနီးဆုံးပွဲကိုရွေးချယ်ပါ - သင့်ပြissueနာကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
ထို့နောက်သင့်အားပြtheနာ၏တည်နေရာကိုအစီရင်ခံရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ လမ်းဆုံ၊ ကဒ်နံပါတ်သို့မဟုတ်လမ်းလိပ်စာတစ်ခုကိုသင်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
တိကျသောလိပ်စာတစ်ခုတင်ပြရန်အရေးကြီးသည်။ ခိုင်လုံသောမြို့လိပ်စာမရှိသော CSB တောင်းဆိုမှုများကိုငြင်းပယ်ဖွယ်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်ပြreportingနာတစ်ခုကိုသတင်းပို့လျှင်၎င်းသည်လွယ်ကူပါသည်။
သင်၏အိမ်နီးချင်းအဆောက်အ ဦး များနှင့်ပတ်သက်သောပြissuesနာများအတွက်မှန်ကန်သောလိပ်စာကိုတင်ပြရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။ တစ်ခါတစ်ရံအလည်အပတ်သွားခြင်းကအကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည် Google Maps ကို လိပ်စာတစ်ခုထောက်ပြရန်။ သင်သည်လည်းလိပ်စာတစ်ခုကိုအတည်ပြုနိုင်သည် မြို့၏လိပ်စာနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုရှာဖွေရေးစာမျက်နှာ.
CSB သို့သင်အစီရင်ခံသောပြissueနာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင်၏ပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်စရာမေးခွန်းများစွာကိုသင့်အားမေးနိုင်သည်။ ထိုမေးခွန်းများကိုသင်၏စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးဖြေဆိုပါ - သင်တစ်လမ်းတည်းဖြင့်ဖြစ်စေအခြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရမည်။
၀ န်ဆောင်မှုတောင်းခံမှုအားလုံးနှင့်အတူအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤသည်အလွန်တိကျတဲ့ရရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုဌာနသည်သင်၏ပြissueနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်သင်ကူညီနိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံး။
ပြtheနာရှိရာနေရာအတိအကျမှတ်သားဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဥပမာ - ပြtheနာကပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရှေ့မှာဒါမှမဟုတ်လမ်းကြားမှာလား။ အကယ်၍ သင်သည်လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်ပြreportedနာတစ်ခုဖြစ်ပွားပါကသင်၏ပြifနာနှင့်သက်ဆိုင်ပါကလမ်းဆုံ၏ဘယ်ထောင့်ကိုသတိပြုပါ။ တွင်းပေါက်များသို့မဟုတ်အခြားလမ်းပြissuesနာများအတွက်၊ ပြtheနာ၏လမ်းကြောင်း (မြောက်ဘက်သို့သွားသော၊ တောင်ဘက်စွန်းစသည်) ကိုရှင်းပြရန်ကြိုးစားပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာရွေးချယ်နိုင်သော်လည်းအလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ သင့်တွင်ပြtheနာ၏ဓာတ်ပုံများရှိပါက CSB ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင်ဒီမှာ upload လုပ်နိုင်သည်။ PDF စာရွက်စာတမ်းများသည်သင်၏ပြissueနာနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
ဖိုင်များကိုတစ်ကြိမ်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ပထမဆုံးဖိုင်ကိုတင်ပြီးနောက်၊ သင်ပိုမိုတင်ပို့နိုင်သည်။ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှကြည်လင်ပြတ်သားသောဓာတ်ပုံများသည်သင်၏ Citizens of Service Bureau ကိစ္စအားဖြေရှင်းရန်အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
သင်၌ထည့်သွင်းရန်ဖိုင်များမရှိပါကအောက်ခြေရှိ“ ကျော်သွားသောအထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများ” ကိုနှိပ်ပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သောနိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုကသင်၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုသင့်အားလိုအပ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ သင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောအချက်အလက်များကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးမလိုအပ်ပါ၊ သို့သော် CSB သည်ပြissueနာတစ်ခုအားရှင်းလင်းရန်သင့်အားဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်လျှင်ဖုန်းနံပါတ်ကောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုကကူညီနိုင်သည်။
သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်သို့မဟုတ်အကောင့်နံပါတ်ကိုထည့်ပြီးသောအခါသင်တောင်းဆိုချက်ကိုတင်ပြနိုင်သည်။ တင်သွင်းခြင်းကိုနှိပ်ပြီးသည်နှင့်သင်တောင်းဆိုချက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုအတည်ပြုသောစာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုပေးလျှင်အသေးစိတ်အချက်အလက်ပါသောအီးမေးလ်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အတည်ပြုစာမျက်နှာတွင် ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုနံပါတ်နှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားမည့်နေ့စွဲကိုသင်မှတ်သားထားလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းအပိုင်း၌သူတို့အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
ပြweetနာတစ်ခုသတင်းပို့ရန် @stlcsb Tweet
အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာအရကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးပြissuesနာများကိုနိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့သတင်းပို့ရန်အမြန်လမ်းရှာလျှင်၊ ပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ တွစ်တာ.
သင်၏တွစ်တာရွေးချယ်မှုအက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ လိပ်စာနှင့်ပြproblemနာ၏အကျဉ်းချုပ်ပါသည့်တွစ်တာရေးသားပါ။ မင်းကစာလုံးရေ ၂၈၀ လောက်ပဲကန့်သတ်ထားပေမယ့်တိကျပေမယ့်တိကျသေချာဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။ သင့်တွင်ပြtheနာ၏ဓာတ်ပုံများရှိပါကသင်၏ tweet တွင်ဓာတ်ပုံ ၄ ခုအထိပူးတွဲနိုင်သည်။
အရာအားလုံးအတူတူပြီးတာနဲ့ tweet ပေးပို့ပါ @stlcsb တွစ်တာပေါ်မှာ။ CSB သည် ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုနံပါတ်နှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားမည့်နေ့ရက်တို့ဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားလိမ့်မည်။ အကောင့်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုနှင့်အတူ Up ကို
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုချက်နံပါတ်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး၊ CSB ဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုအခြေအနေစာမျက်နှာ။ သင်၏တောင်းဆိုချက်အသေးစိတ်နှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားမည့်နေ့ရက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ပြtheနာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုတင်ပြပါကထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုလည်းသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပြီးစီးသည့်ရက်စွဲ၊ ဖြေရှင်းချက်နှင့်ရှင်းလင်းချက်ကိုဖော်ပြပါမည်။
ကျွန်ုပ်၏ CSB ပြissueနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ အခုဘာလဲ
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးသောအခါသင်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုမှုသည်ပိတ်သွားကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။ တောင်းဆိုမှုသည်မှားယွင်းစွာရှိသည်ဟုသို့မဟုတ်သင်တုန့်ပြန်မှုမလုံလောက်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကပြtheနာကိုထပ်မံဆွေးနွေးရန်နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုကိုဆက်သွယ်ပါ။ CSB ကို (314) 622-4800 သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်သည် csb@stlouis-mo.gov နောက်ဆက်တွဲရန်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် @stlcsb မှာ tweet သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုချက်နံပါတ်နှင့်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတောင်းဆိုပါ။
အခက်အခဲရှိသေးလား။ သင်၏ NIS ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင့်နိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုဌာနဗျူရို၏တောင်းဆိုမှုကိုဖြေရှင်းရန်အခက်အခဲရှိပါကသင့်ရပ်ကွက်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကု။ အဆိုပါ NIS မြို့ကြီးဌာနအားလုံးအတွက်သင်၏ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည် သူတို့သည်သင်၏ပြissueနာကို CSB နှင့်ဖြစ်စေ၊ သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုကိုင်တွယ်သောဌာနနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေဖြေရှင်းနိုင်သည်။
သင်၏ NIS အတွက်အချက်အလက်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ Dutchtown အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကုစာမျက်နှာ.
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် သြဂုတ်လ 11th, 2020 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown အိမ်နီးချင်းအရင်းအမြစ်များ နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုမှ Dutchtown လမ်းညွှန်